गण्डकी प्रदेशका सांसद र पिएलाई ५० लाख बढी दशैं भत्ता पठाइयो – Tandav News
गण्डकी प्रदेशका सांसद र पिएलाई ५० लाख बढी दशैं भत्ता पठाइयो
Tandav News द्वारा २०७८ आश्विन २२ गते शुक्रबार १६:२१ मा प्रकाशित
दिपक के श्रेष्ठ
यस वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले दशैं भत्ता नपाएपनि गण्डकी प्रदेशका सदस्यहरुको खातामा भने रकम निकासा गरिएको छ ।
प्रदेश सांसदहरुलाई बजेटमा उल्लेखित पारिश्रमिक ऐनअनुसार १ महिनाको तलबबराबरको भत्ता पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदलाई उक्त रकम पठाइएको हो । प्रदेशका सांसदसँगै उनीहरुका सहयोगी (पिए)लाई समेत १ महिनाको तलब दशैं भत्तास्वरुप पठाइएको छ ।
प्रदेश सभामा हाल ५९ जना सांसद रहेका छन् । उनीहरुको मासिक तलब ५४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सभामुखको तलब ६२ हजार रुपैयाँ हाराहारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सांसद र उनीहरुका पिएको खातामा आज भत्ता पठाइएको हो ।
सांसद र पिएलाई १ महिना बराबरको तलब अतिरिक्त उपलब्ध गराउँदा ५० लाख रुपैयाँ बढी निकासा हुन्छ । हाल पिएको तलब ३० हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सचिवालय अन्तरगत ५ समिति छन् । समितिका संयोजकको भत्ता भने केही बढेर गएको छ । यसैगरी, प्रदेशका मन्त्रीहरुको दशैं भत्ता मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पठाइनेछ । मन्त्रीहरुलाई पनि १ महिनाको तलब बराबरनै भत्ता उपलब्ध गराउने परिपाटी रहेको छ ।
स्मरणीय छ, अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसका १५ जना सांसदले दशैं भत्ता नलिने निर्णय नै गरेका थिए । सचिवालयले सांसदको भत्ता खातामा जम्मा गरिदिएपछि बैठकमार्फत ‘भत्ता नलिने र खातामा आएको भत्ता सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने’ निर्णयपश्चात् उक्त भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गराइएको थियो ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
सल्लाको खोटो बेचेर लाखौँ आम्दानी
कृषि उत्पादनमा वृद्धि नभएसम्म आर्थिक विकास असम्भव :मुख्यमन्त्री पौडेल
१० लाख युरोको नोट देख्दा प्रहरी दङ्ग , स्याङ्जाका गणेश सहित ५ पक्राउ
जन्मदर्ताका लागि अनियमित रुपमा रकम असुलीः नहुँदा रोकियो विद्यालय भर्ना
प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना छः परराष्ट्रमन्त्री खड्का
देशभरको क्षतिको अवस्था हेर्दा वैदेशिक सहायता जुटाएर पनि जनताको पीडामा मल्हम लगाउँछौँः मन्त्री बडू
प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा २० हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे पूजापाठ
चोलेन्द्र र देवीको स्वरमा ‘आँगनिको डिल’ सार्वजानिक
भ्याकेसन मुडः पोखरा र आसपासका यि ठाउँहरु घुम्नुभयो ?
आज मुलुकभर एमालेकाे वडा अधिवेशन हुँदै